प्यारासिटामोल (Paracetamol)/ सिटामोलको बारेमा जान्नै पर्ने कुरा - स्वास्थ्य संसार प्यारासिटामोल (Paracetamol)/ सिटामोलको बारेमा जान्नै पर्ने कुरा - स्वास्थ्य संसार
Home > Khagendra > प्यारासिटामोल (Paracetamol)/ सिटामोलको बारेमा जान्नै पर्ने कुरा
health education Khagendra
प्यारासिटामोल (Paracetamol)/ सिटामोलको बारेमा जान्नै पर्ने कुरा
---डा. खगेन्द्र काफ्ले....
ज्वरो तथा शरीर दुख्दा आबस्यक पर्ने, औषधि पसलमा गएर सिधै किन्न पाइने र डाक्टरको पुर्जा नचाहिने
औषधि को नाम लिनुपरेमा सबैभन्दा पहिला प्यारासिटामोल को नाम आउछ। प्यारासिटामोल अर्थात् यसको एउटा ब्रान्ड सिटामोल को प्रयोग व्यापक भएपनि हामी मध्ये कतिलाई यो औषधि सम्बन्धि धेरै कुरा थाहा नहोला । यो छोटो लेखमा प्यारासीटामोल ( वा सिटामोल ) को बारेमा केहि महत्वपुर्ण जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ ।
पारासिटामोल के हो ?
यो Analgesics (दुखाइ कम गर्ने ) समूह को औषधि हो । साथै Antipyretics (ज्वोरो कम गर्ने ) को रुपमा पनि यसको प्रयोग गरिन्छ ।
कसरि काम गर्छ ?
दुखाइ महसुस गराउने प्रक्रियामा Prostaglandin भन्ने रसायनको महत्वपुर्ण भूमिका हुन्छ । स्वस्थ मानिसको शरीरमामा Prostaglandin कम भएपनि चोटपटक लाग्दा, शरीर भित्र का तन्तु तथा कोसिकामा कुनै कारणले क्षति पुग्दा यो रसायन धेरै बन्ने गर्छ । पारासिटामोलले शरीरमा Prostaglandin भन्ने रसायन बन्ने प्रक्रियामा अबरोध गरेर र दुखाइलाई कम गर्छ ।
यसको साथै हाम्रो दिमागको हाईपोथालामस (Hypothalamus) भन्ने दिमागको अंगले शरीरको तापक्रम लाइ नियन्त्रण गर्ने गरेको हुन्छ। पारासिटामोलले त्यहाँ गएर शरीर को तापक्रमलाई कम हुने गरि सेट गर्दिन्छ जसले गर्दा ज्वोरो ठिक हुन्छ ।
पारासिटामोल के मा प्रयोग हुन्छ ?
निम्न तथा मध्यम खालका दुखाइ जस्तो कि टाउको दुख्ने, शरीर दुख्ने, जोर्नी दुख्ने इत्यादी र ज्वोरो, रुघाखोकी जस्ता समस्या मा यसको प्रयोग हुन्छ । रुघा खोकी, ज्वोरो या दुखाई को लागि यसको प्रयोग एक्लै (ट्याब्लेट वा झोल औषधिको रुपमा) अथवा अरु औषधि संग मिलाएर दिने गरिन्छ । उदाहरण को लागि रुघा लाग्दा डाक्टरले दिने ट्याब्लेट सिनारेस्ट (Sinarest) भन्ने औषधिमा पारासिटामोलको मात्रा 500mg मि.ग्रा. हुन्छ ।
विभिन्न कम्पनि हरुले आफ्नो आफ्नो ब्रान्ड नाम दिएर (जस्तै सिटामोल, क्रोसिन ) 500 वा 650 मिलिग्राम ट्याब्लेट को रुपमा यो औषधि निकाल्ने गरेका छन् । यो झोल को रुपमा पनि पाइन्छ । बयस्क मानिसले एक पटकमा आवस्यकता हेरी ५०० मिग्रा का एउटा वा दुइटा ट्याब्लेट दिनमा ३ या ४ पटक सम्म लिन सक्छन । तर २४ घन्टामा ४ वोटा भन्दा बढी लिनु परेमा डाक्टरको सल्लाह बिना नलिनुहोला ।
औषधि खाएको आधा घण्टा भित्र दबाइको असर सुरु हुन्छ र ६ घण्टा पछी बिस्तारै कम हुदै जान्छ ।
कुन बेला डाक्टरलाई नसोधी नखाने?
डाक्टरको सल्लाह नलिकन बच्चाहरुलाई नदिएको राम्रो। साथै अरु कुनै औषधि खादै हुनुहुन्छ भने पनि एक पटक डाक्टर लाइ भनेर मात्र यो औषधि लिनुहोला । लगातार (५-७ दिन भन्दा धेरै ) लिनु परेमा पनि डाक्टरलाई सोधेर मात्र लिनु होला ।
कलेजो र मृगौलाका बिरामीहरुलाई यसले अरु हानी गर्न सक्छ । दिनहु रक्सि सेवन मानिसले औषधि लिनु अगाडी कलेजोको जांच गर्नु जरुरि छ । साथ साथै रक्सि र सिटामोल एकैपटक सेवन गर्दा कलेजो मा खतरनाक असर पर्न सक्छ ।
यदि यहि औषधि पहिला लिदा शरीर मा एलर्जी भएको भए (लक्षणहरु हुन्-अचानक शरीर चिलाउने, छालामा बिमिरा आउने , सास लिन गारो हुने चक्कर आउने भएमा आदि ) अर्को पटक फेरी पारासिटामोल कहिलेइ नलिनुहोला ।
साइड इफेक्ट पनि छन् ?
दुखाई कम गर्ने जुन सुकै औषधिले कलेजो, मृगौला नराम्रो असर गर्न सक्छन । लामो समय (महिनौ) खाने मानिसले डाक्टर को सल्लाह अनुसार बीच बीचमा जांच गर्नु जरुरि हुनसक्छ। पेटमा एसिडिटी बढाएर gastritis गराउने भएकाले दुखाई कम गर्ने औषधिहरु सकेसम्म खाली पेट खानु हुदैन । लामो समय सम्म खानु पर्यो भने डाक्टरसंग सल्लाह गरि साथमा पेट मा अम्लपन कम गर्ने औषधि लिन सकिन्छ ।
दुखाई र ज्वोरो बिमारिका लक्षण हुन् र आफैमा कुनै रोग होइनन । धेरै पटक यिनका कारण कुनै सामान्य रोग हुन्छन जुन आफै ठिक भएर जान्छन । तर शरीरमा कहिलेकाँही अरु नै गम्भीर बिमारी हुनसक्छ जुन बाहिर ज्वोरो को रुपमा मात्र देखिएको हुनसक्छ । यसैले घरि घरि ज्वोरो आएमा, निकै नै तेज ज्वोरो आएमा या धेरै पारासिटामोल खानुपरेमा डाक्टरलाई जति सक्दो छिटो देखाएर मात्र दबाई सेवन गर्दा बुद्धिमानी हुन्छ ।
डा खगेन्द्र बाट लिखित अन्य लेखहरु यहाँ हेर्नुहोस...
(स्वास्थ्य सम्बन्धि कुनै समस्या भएमा स्वास्थ्य संसार को फेसबुक पेज https://www.facebook.com/SwasthyaSansar मा क्लिक गरि आफ्नो समस्या मेसेज गर्नुहोस, यसको अलावा यहाँ क्लिक गरेर पनि पठाउन सक्नुहुनेछ )
Item Reviewed: प्यारासिटामोल (Paracetamol)/ सिटामोलको बारेमा जान्नै पर्ने कुरा Rating:5Reviewed By: Dr Khagendra Kafle